Egwuregwu Agwọ 🥇 Tinye ma Nwee Obi fromtọ site na Emulator.online
Egwuregwu agwọ: otu esi egwu egwu site na nzọụkwụ? 🙂
Gwuo egwu backgammon online n'efu, naanị soro ntuziaka ndị a:
nzọụkwụ 1 . Mepee ihe nchọgharị gị masịrị ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ egwuregwu Emulator.online
nzọụkwụ 2 . Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Naanị ị ga-pịa Play ma ị nwere ike ịmalite ịhọrọ nhazi nke kachasị amasị gị. Ga-enwe ike ịhọrọ n’etiti usoro kpochapụwo na ọnọdụ mgbochi (njem) . 🙂
Nzọụkwụ 3. Ebe a ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Ị nwere ike " Tinye ma ọ bụ wepu ụda ", pịa" Play "bọtịnụ ma malite igwu egwu, ị nwere ike" kwusi "Na" Malitegharịa ekwentị "n'oge ọ bụla.
Kwụpụ 4. Iji merie egwuregwu ị ga-ebibi usoro nke agba bọọlụ site na ịtụba afụ. Mgbe ị gbakọtara atọ ma ọ bụ karịa nke otu agba, a na-ewepụ ha.
Kwụpụ 5. Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "Malitegharịa ekwentị" ịmalite ọzọ.
Gịnị bụ Egwuregwu Agwọ? 🐍
The Egwuregwu agwọ bụ egwuregwu maka ekwentị mkpanaaka, video consoles na kọmputa, na nke ebumnobi bụ isi bụ iji duzie isi agwọ n'ofe ihuenyo , na-anwa iri apụl ndị a na-ekesa n'ụzọ na-enweghị usoro. Ka ị ghara ida, ị ga-ezere ịkụ mgbidi na ọdụ agwọ ahụ.
Mdị mfe ya mere ka ọ bụrụ egwuregwu pụrụ iche. Kwesịrị iji akụ na keyboard gị iji duru agwọ ahụ gaa mmeri.
Akụkọ banyere egwuregwu 🤓
A mụrụ agwọ dị ka Blockade na Ọktọba 1976 . Na egwuregwu mbụ ị na-emeso ndị ọzọ na-agba mbọ.
Ebumnuche bụ ka ndị iro gị daa gị na ha ka ị ka kwụ. I nwere ike ibugharị ogo 90 na ngagharị ọ bụla ma maka nke a ị nwere bọtịnụ ntụzi aka ochie.
Na nsụgharị Snake Game kachasị ama ama, ọdịiche dị iche na akaụntụ na nke bụ onye iro anyị bụ onwe anyị, ebe anyị nwere ike ịdaba n'akụkụ ọ bụla n'ime anyị ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya.
Nsụgharị nke Blockade na agwọ enwere ọtụtụ. Atari mepụtara nsụgharị abụọ maka Atari 2600, Dominos na Gburugburu . Maka akụkụ ya, ụdị akpọrọ Worm e kenyere maka Commodore na Apple II kọmputa .
Na 1982 otu egwuregwu akpọrọ A tọhapụrụ Nibbler , agụụ na-agụ agwọ na ntọala yiri nke Pac-Man labyrinth (1980).
A iche, Nibble (1991) bịara zite ya na MS-DOS dị ka usoro ihe atụ QBasic. Na 1992, a na-akpọ ụdị Ọsọ Rattler so na Microsoft Entertainment Pack nke abụọ, nchịkọta egwuregwu, ụfọdụ nke agbakwunyere na nsụgharị nke Windows, dị ka Minesweeper ma ọ bụ FreeCell.
Na mmalite a, ọ bụghị ihe ijuanya na Nokia nzọ na Blockade / agwọ / Nibbler dị ka ndabara game maka ekwentị Nokia ha. Ọnọdụ ahụ dị mfe ma na-eri ahụ, ọ na-atọ ụtọ, yana ihe ọ chọrọ chọrọ chọrọ.
Agwọ Egwuregwu Agwọ ☝️
Egwuregwu Agwọ bụ kpochapụwo egwuregwu mkpanaaka na egwuregwu kọmputa nke oge ahụ, ya mere na o kwesịghị iju anyị anya ịchọta otutu ụdị dị iche iche nke egwuregwu a . Ihe kpatara na ọ na-aga n'ihu na-abụ nsụgharị bụ ike riri ya na ịdị mfe mgbe ọ na-egwu egwu, ọ nweghịkwa ihe ndị ọzọ ga-aga n'ihu gụnyere ya na ahịa.
Na ihe ndị a niile, egwuregwu ahụ emere na iri afọ asaa abụghị nke echefuru echefu, anyị ga-akpọkwa aha ole na ole nke Egwuregwu Agwọ.
Nokia agwọ 1
Ọ bụ mbụ agwọ emegharịrị maka Nokia S60. Nke a bụ ụdị nke a na-ekwu maka ya mgbe anyị kwuru na anyị na-egwu Egwuregwu Agwọ na ekwentị anyị.
Agwo The Original Agwo . Ọ bụ agwọ dakọtara na ekwentị iPhone. Na ụdị a ha chọrọ inye ya vintage anya na o nwere na mbụ mobiles.
TiltSnake . Jiri accelerometer.
Mobile agwọ. Omuma agwọ maka iPhone na iPod aka.
GeoSnake. Versiondị a nwere ọrụ ọhụrụ dị iche na ihe anyị na-ahụkarị, nke ahụ bụ na ị nwere ọrụ ọhụrụ na-eji dị iche iche map ala.
Agwọ The Original. Nọgidere eserese nke ochie mobiles kwesịrị ntụkwasị obi dị ka o kwere.
Ọbụna consoles ndị a ma ama, nke nwere eserese na njirimara ndị na-enweghị atụ na 90s, enwebeghị ike iguzogide na-ewepụta nsụgharị nke Agwọ Egwuregwu . Ha niile etinyela ihe ọhụrụ na nsụgharị ọhụrụ ha, mana ha na-edebe isi ihe dị n’egwuregwu agwọ. N'ime ha bụ PSP, Play Station 3, WII, Nintendo DS na Xbox 360.
Edebere agwọ nke ọma mfe ma anya na na usoro nke gameplay. Ihe a na-elekwasị anya bụ agwọ nke ndị egwuregwu nwere ike iduru uzo anọ: aka ekpe, aka nri, elu na ala .
Ihe pikselụ (apụl) na-egosi enweghị usoro na ihuenyo ma jide ya n’isi nke agwo. Na pikselụ nke ọ bụla na-eri, ọ bụghị naanị na akara onye ọkpụkpọ na-abawanye, kamakwa mkpokọta ogologo nke kwụ n'ahịrị site n'otu nkeji.
Yabụ, oghere dị na ihuenyo na-adịwanye obere, nke n'aka nke ya na-eme ka ọkwa nke ihe isi ike na-aga n'ihu. Egwuregwu ahụ na-agwụ mgbe agwọ ahụ metụrụ ọnụ nke ebe egwuregwu ma ọ bụ ahụ gị.
Dị ka ọtụtụ agba ochie ochie, a na-enye agwọ n'ọtụtụ ọdịiche dị ka egwuregwu ịntanetị na ntanetị ruo ọtụtụ afọ. Dabere na iche iche, etinye ihe mgbochi ndị ọzọ n'okporo ụzọ ndị egwuregwu iji mee ka nsogbu sikwuo ike.
Iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị elu karịa, ihe nkwụnye ego atụkwasịwo ụfọdụ nsụgharị.
Ihe ọchị banyere game bụ na ọrụ ya bụ mfe, o yikwara ka ọ dị mkpa ka ha gwa anyị aghụghọ ọ bụla iji zere ịda. Na njedebe nke ụbọchị, anyị nwere ihuenyo niile ka anyị wee na-egwu egwu. Ma otu ihe na-eme anyị mgbe niile, anyị na-amata onwe anyị n'ime agwọ aru n’enweghi ụzọ isi ebe ahụ pụọ.
Ọfọn, atụla anya aghụghọ nke ndụ na-enweghị ngwụcha ma ọ bụ otu esi eme ka otu agwọ anyị dapụ n'ụzọ ọrụ ebube, ee e. Ndị a bụ ụfọdụ Atụmatụ dị mfe iji buru n'uche ọ bụrụ na anyị chọrọ ka agwọ anyị tolite ma ghara ịdaba n'ime ya.
Na mbụ, ọ dị mfe ịkwaga gburugburu ihuenyo na enweghị isi zigzags n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ohere, mana oge na-abịa mgbe nke a agaghị ekwe omume n'ihi oke Agwọ anyị.
Lee, anyị nwere ike ikwu na ị na-amalite mgbe niile tụgharịa agwọ ahụ n’ime , otu a ị ga - ezere ịhapụ isi tọrọ atọ n’etiti ahụ.
Nke a bụ isi ọrụ nke Agwọ anyị, ọ ga-eri apụl ka o wee too. Ọfọn, ebe a bụ mmejọ ọzọ a na-ahụkarị, nke ahụ bụ nke ahụ i gaghi agakwuru ha ozugbo n’eburu n’uche ndụmọdụ mbụ. Debe ahụ agwọ ahụ n'okpuru oge niile, ebe ọ bụrụ na ọ bụghị, o yikarịrị ka ị ga-ejedebe akụkụ nke ọdụ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, uwe na apụl ruo mgbe ị ga-ejide n’aka na ị nwere ike ịchịkwa agwọ gị dum.
Maara egwuregwu a? Anyị na-atụ anya na ebe ọ bụ na ị nwere akụkọ egwuregwu a na otu esi egwu ya, ị ga-ahụ etu na-akpali akpali ọ nwere ike ịbụ.
Have nwere egwuregwu a dị ebe a ma ọ dịkwa n'efu, ya mere enweghi mgbaghara ịmalite igwu egwu ma were ọtụtụ awa glued na ihuenyo.
Egwuregwu ndụ ogologo oge!